Izindlela ezihamba phambili zeWhatsApp Okufanele Uzame (2020) - Izinhlelo Zokusebenza
Ekufuneni ezinye izindlela ezinhle kakhulu ze-WhatsApp?Yebo, sikubambile.With emhlabeni Abasebenzisi abasebenza nyangazonke abayizigidi ezingama-2000 . Isithunywa se-WhatsApp esiku-Facebook, ngaphandle kokungabaza, yisevisi yemiyalezo esetshenziswa kakhulu emhlabeni. Ihlala ikhipha izibuyekezo futhi igcina ingeza izici ezintsha ukwenza ulwazi lomsebenzisi lube ngcono. Kepha abanye abasebenzisi badinga okungaphezulu kwalokho; badinga ubumfihlo; badinga ukwethenjwa ukuthi idatha yabo ebalulekile izophepha. Yize i-WhatsApp inikeza ukubethela okuphela kokuphela, kunezikhala eziningi kakhulu kuyo.
Masibe neqiniso. Asikaze siyifunde leyo migomo nemibandela emide ngenkathi sibhalisela okuthile. AbakwaWhatsApp bakhangisa ngobuhlakani idatha yabo yohlelo lokusebenza ebethelwe ukuphela, kodwa iqiniso ukuthi kuleyo Migomo nemibandela, kunezinto ezithile ezinikeza iqembu lezinkampani ze-Facebook amalungelo amaningi okusebenzisa imininingwane yakho. Bangasebenzisa imininingwane yakho ngezinhloso ezahlukahlukene ngaphakathi kweNhlangano futhi bangayinikeza noHulumeni uma beyifunela noma yini engaphandle kwendlela.
I-Facebook, ikakhulukazi, ibisematheni ngezinto eziningi ezihlobene nedatha yomsebenzisi, futhi azilungile.Ngakho-ke, abantu abaningi babheka ezinye izindlela eziphephe futhi ezivikelekile kune-WhatsApp. Uma uphakathi kwabo, silapha ukukusiza. Njengoba isihloko sihamba, sizokudlulisa kwezinye izindlela ezinhle kakhulu ongazisebenzisa esikhundleni se-WhatsApp.
Uzibuza ukuthi iyiphi i-Best WhatsApp noma i-Signal App? Hlola I-WhatsApp vs Signal ukuqhathanisa.
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili ze-WhatsApp 2020:
Isiginali isithunywa esizimele
Lolu hlelo lokusebenza lwemiyalezo olususelwa e-UK luyindlela engcono kakhulu ye-WhatsApp. Yenza konke okufanele kwenziwe yisithunywa. Njengoba inezinto eziningi ezengeziwe, i-interface yomsebenzisi ilula, abasebenzisi abasha ngeke babe nenkinga yokuyisetha. Nge-API evulekile, ithenjwa kakhulu abasebenzisi, futhi abaningi bayayithanda kune-WhatsApp.
Imilayezo yeTelegram ibethelwe ukuphela kokugcina, njenge-WhatsApp, futhi ungathumela nemiyalezo yokuzilimaza. Ngokuqhathanisa, i-WhatsApp ikuvumela ukuthi udale amaqembu aqukethe amalungu angama-256 bese wabelana ngamafayela afika kuma-100 MBs. Ku-Telegram, Ungakha iqembu elingabamba abasebenzisi abangafika ku-200,000 futhi lihlanganyele amafayela emidiya afika kuma-Gigabyte ama-2 ngokuhamba okukodwa.
Inikeza izwi kanye namakholi wevidiyo. Kunezici eziningi ezimnandi ezifana neBots nemidlalo engatholwa ngaphakathi kwesithunywa esizothuthukisa umuzwa wakho.
Usayizi weqembu kufika kumalungu angama-200,000
Amandla okuthumela ifayili lemidiya elifika ku-2GB
Ilula kakhulu kudivayisi.
Ukubethela okuphephile kwemininingwane yomsebenzisi.
Amandla wokwengeza amaBots nokudlala imidlalo.
iqoqa imethadatha (egcinwe kumaseva izinyanga eziyi-12 ubuningi)
Ukutholakala Kwengxenyekazi:I-Android, iOS, Windows mobiles, iPadOS, Windows PC, MacOS, Linux (Mahhala)
2. Isiginali Eyimfihlo
Lesi sithunywa silethwa kuwe ngonjiniyela abakhe isiphetho sokuphela kokubethela kwe-WhatsApp. Kepha ngokungafani neWhatsApp, iSiginali isigijimi sinohlelo lwemithombo evulekile, olwenza luphephe kuneWhatsApp. Ukwengeza kulokho, iSiginali nayo inezici ezimbalwa zokuphepha ezinjengemilayezo yokuzilimaza kanye nezici zokuphepha kwesikrini, okusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthatha isithombe-skrini uma sinikwe amandla.
Isiginali ayibetheli kuphela imiyalezo oyithumelayo, kepha ibuye ibethele yonke idatha owabelana ngayo, kufaka phakathi izingcingo namafayela wemidiya. Akekho umuntu, ngisho neSignal, ongafunda imilayezo yakho futhi ezwe izingcingo zakho.
Ungenza futhi wabelane ngezitika zakho futhi wakhe amaqembu afana ne-WhatsApp. Isiginali ivumela isipele sengxoxo kuphela samadivayisi we-android, lokho futhi kudivayisi hhayi kwenye indawo.Ukuba lokhu kuphephile, kusetshenziswa ngabantu abaholayo emhlabeni we-IT njengo-Edward Snowden noJack Dorsey.Yini enye oyidingayo ukuze uqinisekise ukuthi iyindlela ephephile nevikelekile ngempela ye-WhatsApp?
Imvelo ephephile yemilayezo
Uhlelo lomthombo ovulekile
Izitolo zincane kakhulu ku-No metadata
Ukubethela kwamakholi wefoni
Ayikwazi ukuyisebenzisa uma ingabuyekeziwe. Futhi izibuyekezo zivame kakhulu. Lokho kuhle kakhulu kwezokuphepha, kepha sikungezile ngaphansi kwesigaba se-cons ngoba izibuyekezo zivame kakhulu futhi zingaphazamisa umuzwa.
Amafayela emidiya angafika ku-300kbs kuphela angathunyelwa.
Ayikho inketho yokulondoloza ingxoxo yabasebenzisi be-iOS.
Ukutholakala Kwengxenyekazi:I-Android, iOS, iPadOS, Windows, Mac, Linux. (Mahhala)
Lobuhle bohlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo bungolwesithathu ohlwini lwethu, Buqanjwe yinkampani esekwe eSwitzerland, njengezwe layo lendabuko, isixhumi esibonakalayo somsebenzisi sihle futhi siyathokozisa emehlweni. I-interface enhle yomsebenzisi kanye nohlelo lwemithombo evulekile evulekile luyenza enye indawo ekahle ku-WhatsApp.
Kucwaningwa ngokuzimela, futhi imiphumela yocwaningomabhuku nayo yenziwa ibe sesidlangalaleni, ngaleyo ndlela ikwenze kube sobala endleleni esebenza ngayo.Inokuphela kokuphela kobuchwepheshe bokubethela futhi inikezela ngesici somyalezo wokuzilimaza. Ucingoinendawo yayo yamafu lapho kungenziwa khona izipele zengxoxo.
Inikeza ukushaya komsindo nevidiyo kokugcina kokubethela. Amakholi wevidiyo weqembu angenziwa kusetshenziswa iWire kubantu abangafika kwabayi-10.Ungangena ku-Wire kusuka kumadivayisi amaningi ngasikhathi sinye, isici i-WhatsApp engasinikeli.
Izinhlelo zomthombo ovulekile.
Amandla wokungena ngemvume kusuka kumadivayisi amaningi ngasikhathi sinye.
Isixhumi esibonakalayo esilula kepha esihle futhi esihlukile somsebenzisi uma siqhathaniswa nezinye izithunywa
Ikhono leqembu levidiyo.
Igcina imethadatha yakho.
Ukugxila kusezweni lezinkampani.
Ukutholakala Kwengxenyekazi:I-Android, i-iOS, i-MacOS, izandiso zesiphequluli, i-Linux. (Mahhala)
Obeye aziwe njengoURakuten Viberwuhlelo lokusebenza lwemiyalezo ese-Japan olususelwa eJapane oluya ngqo kuWhatsApp. Inakho cishe konke i-WhatsApp okufanele ikunikeze futhi inezici ezithile i-WhatsApp engenazo. Imilayezo yakho, izingcingo, kanye nemidiya okwabelwana ngayo iphela ekugcineni ibethelwe ku-Viber. Ungakha amaqembu kuViber anabasebenzisi abangafika kwabangu-250 futhi uqoqe izingcingo zevidiyo ezinabasebenzisi abangafika kwabangu-20.
Kukhona ukusekelwa kwama-GIF nezitikha nakho. Ungangenisa noma uzenzele izitika zakho bese wabelana ngayo ngokuxhumana kwakho.Isici esivelele seViber ukuthi ivumela ukubizwa kwamazwe ngamazwe ngamanani wokuqokwa kubasebenzisi abangenayo i-akhawunti yeViber.Ingasetshenziswa kumadivayisi amaningi ngesikhathi esithile.
Esinye isici esinikezwa iViber yisici somphakathi. Kunemiphakathi eminingi eViber lapho ungahlangana khona ngokuthanda nokuphawula kokuthunyelwe.
Umhlangano wevidiyo kungenzeka
Ungenza izingcingo zomhlaba jikelele kubasebenzisi abangenayo i-Viber ngamanani wokuqamba.
Amandla wokudlala imidlalo ngaphakathi kohlelo lokusebenza
Akunaso isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula.
Ukutholakala Kwengxenyekazi:I-Android, iOS, iPadOS, Windows PC, Mac, Linux. (Mahhala)
Izinto ziba nzima uma kukhulunywa ngeThreema. Uhlelo lokusebenza olukhokhelwe nolunye lwezinhlelo zokusebenza zemiyalezo ephephe kakhulu ongazithola emakethe. Iphela ekugcineni ukubethela imiyalezo, imidiya eyabiwe, kanye nemisebenzi yesimo. Ayikho imethadatha eqoqwayo, futhi kunezinhlobo ezingaphezu kweyodwa zezinketho zokubethela izingxoxo ezibetheliwe ezitholakala nge-Threema.
Ayinaso isigaba sokushaya, akukho kholi yomsindo noma yevidiyo engenziwa kusetshenziswa uhlelo lokusebenza, futhi yingakho siyibalile ekugcineni.Kepha noma ingekho esigabeni sokubiza, uma ubheka isici sokuphepha sohlelo lokusebenza, kufanelekile ukungazinaki lezo zici ezingekho.
I-interface yayo iqonde ngqo futhi ayifinyeleli kumamaki ezinye izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo, kepha uma kukhulunywa ngobungani bomsebenzisi, kulula ukuyisebenzisa nokusetha.Ukuze usebenzise iThreema, awudingi ukunikela ngenombolo yocingo noma ikheli le-imeyili. Ngaleyo ndlela, wenza i-ID yakho ngokungaziwa.
Yonke imilayezo, kanye nemidiya, ibethelwe.
Akunasidingo sokunikeza inombolo yocingo noma i-imeyili yokwakha i-akhawunti
I-interface elula futhi esebenziseka kalula
Akekho umuntu ongakuthumela umlayezo. Udinga ukuvuma kuqala imilayezo.
Inkinga yokusebenza ngoxhumo lwe-inthanethi oluhamba kancane.
Azikho izinhlelo zemithombo evulekile.
Ukutholakala Kwengxenyekazi:I-Android, iOS, Iziphequluli.
Amanani:Ungazama i-Threema mahhala kuze kube yizinsuku ezingama-60, asikho isibopho sokuyithenga.
Ezinye izinhlelo ezimbili yilezi
Uhlelo lwebhizinisi:I-CHF 1.40 ($ 1.54)
Uhlelo lwebhizinisi:I-CHF 1.90 ($ 2.09)
Nakhu okutholayo ngezinhlelo ezibalulwe ngenhla
# 1. Ingabe i-WhatsApp ivuliwe?
Iminyaka:Cha, iWhatsApp ayisona isicelo esivulekile, yingakho abantu abaningi bejwayele ukuyilahla ngezinye izindlela ezivulekile futhi ezivikeleke kakhulu.
# 2. Ngabe i-WhatsApp iphethwe yi-Facebook?
Iminyaka:I-WhatsApp ithengwe yiFacebook. Inc ngoFebhuwari 2014 nge $ 19 billion. Ukwenza kube ukutholakala okukhulu kunakho konke kwe-Facebook. Bekuyinkampani ezimele ngaphambi kwalokho.
# 3. Kungani kufanele ngisebenzise ezinye izindlela ku-WhatsApp?
Iminyaka:Isizathu esikhulu kuzoba yizikhala lapho i-WhatsApp inezokuphepha kwayo. Kunemigomo nemibandela eminingi efihliwe efaka idatha yakho engozini. Imininingwane oyinikeza kuWhatsApp ijikeleza kuwo wonke amaseva ezinkampani ezingaphansi kwe-Facebook. Ohulumeni bangabheka idatha yakho uma kunesimo esingaphandle kwendlela. Futhi ukuphathwa yi-Facebook, akuthembekile nakancane ngoba i-Facebook ibhekane namacala amaningi kakhulu uma kukhulunywa ngokuphepha komsebenzisi.
# 4. Iziphi ezinye izindlela okufanele zigwenywe?
Iminyaka:Uma kukhulunywa ngezinye izindlela, lezi esesishilo ziphephile futhi zithembekile, kepha ezinye zazo zimbi kakhulu kune-Whatsapp, futhi kufanele unamathele ku-WhatsApp kunokuzisebenzisa
Yize i-WhatsApp iyi-app enhle kakhulu yemiyalezo, ayiyinhle ngokuba yimfihlo komsebenzisi. Ezinye izindlela esizibalulile azikho ezingeni le-WhatsApp ngokwesisekelo sabasebenzisi, kepha uma kukhulunywa ngezokuphepha, konke kungcono. Uhlelo lokusebenza ngalunye lunobuhle nobubi balo, futhi sibhale konke okudingeka ukwazi ngaphambi kokukhetha noma yiziphi ezinye izindlela.
Landa i-Kik Messenger ye-PC
Ungasithola Kanjani Isivivinyo Samahhala se-Crunchyroll?